Saamaynta Lacagta Cusub ee Itoobiya iyo qorshe la`aanta Xukumada Madaxweyne Muuse Biixi | Berberanews.com
Home WARARKA Saamaynta Lacagta Cusub ee Itoobiya iyo qorshe la`aanta Xukumada Madaxweyne Muuse Biixi
Saamaynta Lacagta Cusub ee Itoobiya iyo qorshe la`aanta Xukumada Madaxweyne Muuse Biixi
Hargeysa-(Berberanews)-Ka dib rabshadihii isbedelka la curtay, kala qoqobkii iyo waddoyinkii deegamadu kala xidheen, wuxuu sababay inuu wax soo saarka dalka Itoobiya hoos u dhaco, isla markaana shaqo la’aanta cududa dhalinyaradu cirka isku shareerto.
Mudo labo sano ah ayaa laga joogaa, markii qiimaha sarrifka kor loo qaaday
Isla markaana lacagta Itoobiya la qiimo jebiyay (1$=26Birr).
Dadka cilmiga dhaqaalaha ku xeel-dheer ayaa sheegay in qiimaha sarrifka suuqa madaw iyo qiimaha Baanka Dhexe isasoo gaadhayaan dhawaan (1Dollar=40-Birr).
Sioo kale waxa bilihii u dambeeyay faraha ka baxay maamulka dhaq-dhaqaaqa sarrifka, Waxana jirtay in lacagta Itoobiya qiimo jab wayn soo food saaray.
Dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka Itoobiya inta badan ka jiray, ayaa waxaa kale oo ka mid ahaa: Caddaalad u qaybsiga hantida iyo ka faa’idaysiga,faraqa u dhexeeya maalgelinta iyo dhigaalka, dheeliga ganacsiga iyo Sarrifka adag oo ku yar ,Culayska daymaha iyo waliba Kor-u kaca dul-saarnimada.
Dalka Itoobiya wuxuu dibeda u dhoofiya, Bunka,Jaadka, cudbiga,ubaxa Iwm. Dawlada Itoobiya alaabaha dibeda loo dhoofiyo, waxay ka hesha adduun lacageed oo gaadhaya $3-Billion Dollar. Dalku badi wuxuu soo dhoofsada alaabaha culculus (Heavy machinery),
Dalka Shiinaha ayaa hogaaminaya dalalka ugu badan ee wax usoo dhoofiya Itoobiya (31%).Waxaana dalka loo soo dhoofiya alaab ku fadhida adduun lacageed oo gaadhaya $16
Magaalada Ganacsiga ee Wajaale waxa si weyn looga dareemay saamaynta isku bedelka lacagta cusub ee Itoobiya, waxana soo food saaray culays xaga suuqa ah, iyo kala iibsiga bucshiradaha kala duwan ee laga iibsan jiray ganacsatada wajaale.
Waxana gebi ahaanba istaagay suuqii magaalada Wajaale , maadama laga guuraayo lacagtii hore ee Itoobiya, ganacsade waliba waxa uu diiday in uu wax ku iibiyo lacagtii hore ee Itoobiya, maadama oo uu isleeyahay hadhow ayay kugu adkaan in uu isa sii dhaafiyo sido kale lacagtii cusbaydna waxay noqotay in laga taxadaro qaadashadeeda maadama laga cabsi qabo in uu ku yimaado hoos u dhac xaga sarrifka ahi.
Wasaarada Maaliyada iyo Baanka Dhexe ee Somaliland, ayaan diyaarin qorshe dhamaystiran oo ku waajahan saamaynta lacagta cusub ee Itoobiya.
Xumuumadda Somaliland ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Biixi iyo Hay’adaha dhaqaalaha ka shaqeeyaa toona kamay hadal saamaynta dhaqandhaqaale ee bedelka lacagta Itoobiya ku keeni karo ganacsatada Somaliland oo adduun badan ku maalgashaday magaalo- ganacsiyeedka Wajaale, waxaanay ganacsatadu halis ugu jiraan inuu soo waajaho jaahwareer dhaqaale oo sababi kara inay hanti badan ku waayaan.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo si weyn loogu soo dhaweeyay Gabilay+Sawirro
Next articleHargeysa: Taliyihii Ciidanka Wershadda Kabista oo toogasho lagu dilay